I-china Recyclable Rigid Card Card Rose Flower Box Yomkhiqizi Wentombi Nomhlinzeki | I-Huaguang
Iphinda isetshenziswe kabusha i-Rigid Cardboard Rose Flower Box YeNtombi
Kunezitayela eziningi zezimbali, sizobanika zona abantu abahlukahlukene ngokuya ngezinhlobo ezahlukahlukene, ziveze incazelo ehlukile. Noma ukuqonda kwezimbali kungajule kakhulu, abantu besimanje ngokuyisisekelo bayazi ukuthumela ama-roses kubathandi, ama-carnation kubadala, neminduze kubangani. Kukhona isixha, ibhasikidi lesandla, ishelufu lebhasikidi, ukufakwa kwebhokisi lembali, ngalinye linendima ehlukile nomphumela.
Isibonelo, kimi, ngingathanda ukuthola isixha sezimbali ngoSuku lukaValentine, olukhulu kakhulu, ikakhulukazi oludonsa amehlo futhi olwenze ukuzethemba kwami ​​kwaba namandla. Labo abanikela ngezipho kubaholi nakubadala ikakhulukazi bazophatha obhasikidi bezimbali namabhokisi ezimbali ukukhombisa inhlonipho nokuvumelana nesimo sabo. Kwesinye isikhathi, ubuntu bomamukeli wezimbali bunamahloni kakhulu, ukhiye ophansi noma imvelo ayifanelekile ukwaziswa kakhulu futhi ingathumela ibhokisi lezimbali.
Okwamanje, amabhokisi ezimbali athandwa kakhulu ngenxa yezizathu ezintathu.
1: ukuvikela izimbali akutholi ukulimala, ukuze izimbali zisesimweni esihle lapho zithunyelwa.
2: ukhiye ophansi, ovela ngaphandle awukwazi ukubona ngqo ukuthi, gcina izinkathazo nezingxoxo ezingadingekile.
3: Isiphetho esiphakeme, izimbali ezithunyelwa ngebhokisi lesipho ngokuqinisekile ziphakeme kakhulu kunesixha nebhasikidi, okwenza sonke isixha sibe sezingeni eliphakeme.
Imvamisa osukwini olubalulekile, izivakashi ezahlukahlukene zezitolo zezimbali emfudlaneni ongapheli, khetha izimbali ozonikeza abantu bazo ababalulekile.
Kunezinhlobo ezintathu zezipho: ibhokisi lesipho esiyisikwele, ibhokisi lesipho elingunxande, ibhokisi lesipho esiphindwe kabili nenhliziyo. Izimbali zebhokisi lesipho esiyisikwele, izimbali zebhokisi lesipho elingunxande ezifanele abaholi, abadala, njll ukukhombisa ukubaluleka kwazo kuzo. Ibhokisi lesipho lesendlalelo esiphindwe kabili ngaphambi kwembali kwinethiwekhi yomlilo okhethekile, izingqimba ezimbili ezingaphezulu nezingezansi zinamadrowa, ungqimba oluhle kakhulu yizimbali ezintsha. Isendlalelo esihle ukubeka isipho, i-lipstick, umgexo nokunye. Abantu abaningi baqala ukulingisa izimbali zebhokisi lezipho eziphindwe kabili, ngqo kwi-Intanethi, kuphela kwintombi ethola ungqimba lwezimbali zombala ezingaziwa mbala, ukumangala kuphenduke ukushaqeka.
Usuku lukaValentine luthandwa kakhulu izimbali zebhokisi lesipho elimise okwenhliziyo, ukubukeka kothando kuthandana kakhulu futhi kukhethekile, kukhona umnsalo omuhle, vumela abantu bangaziboni nje bengaphakathi elihle. Izimbali ezimise okwenhliziyo nazo azibizi. Zicishe zifane nezimbali ezimise okwesikwele, kodwa zihle ngokwengeziwe.
Langaphambilini amakhadibhodi empunga ekhabetheni lokugcina iphepha lezimpahla zangaphansi
Olandelayo: vala ibhokisi lukathayela lokugcina ibhokisi amasokisi egumbi lephepha
Amabhokisi Esipho Ngokwezifiso
Design Ibhokisi Lokupakisha
Amabhokisi Wezipho Zobucwebe
Imikhiqizo emisha yezitolo yokuthengisa esetshenzisiwe kabusha yobuchwepheshe ...
Ngokwezifiso Ilogo Okuprintiwe Isitolo esidayisa yonke impahla Cardboard Gi ...
Professional ukuphrinta isicwebezelisi emihle esingenalutho pac ...
isikwele esimise isikhafu sikaKhisimusi ubuciko bemibono ...
Elula lukathayela wephepha lokupakisha ibhokisi uswidi ...
ukuphrinta kobungcweti ibhokisi lesipho elibomvu ...